सरकार vs डा.गाेविन्द केसी ? - समय-समाचार
सरकार vs डा.गाेविन्द केसी ?
Oct 3, 2020 अनसन, गाेविन्द केसी, डा.केसी, सरकार
काठमाडाैं, असाेज १७ । यसरी राष्ट्रप्रमुख वा पूर्वउपप्रमुखसँगको केसीको भेट यो पहिलो भने हैन ८ बर्ष यता डा केसीको नियति यस्तै बनेको छ ।
चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै डा गोबिन्द केसी अनसन बस्न थालेको पछिल्लो आठ बर्षमा प्रमुख दलका अधिकांश शिर्ष नेताहरुले सरकारको नेतृत्व गरिसकेका छन ।
चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै १९ औं चरणको अनशनमा रहेका डा.गोविन्द केसिको स्वास्थ्यअवस्था दिन प्रतिदिन विग्रदै आएको छ । अनशनको २०औ दिनमा आइपुग्दा पनि छलफल र वार्ताका कुनै पहल भएको देखिदैन ।
चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै २०६९ असार २१मा पहिलो अनसन बसेका डा।गोविन्द केसी अहिले १९औं चरणको अनसनमा छन् । लगातार २० दिनसम्म आमरण अनसनमा बस्दा केसीको स्वास्थ्य अवस्था कम्जोर बन्दै गएको छ । मेडिकल टिमले केसीलाई आइसियुमा लौजान आग्रह गरेपनि केसी नमानेको उनका सहयोगि प्रितम सुवेदीले जानकारी दिए ।
पछिल्लो अनशन गत भदौ २९ मा जुम्लाबाट सुरु गरेका डा केसीलाई स्वास्थ्यअवस्था ख्याल गर्दै केही दिन पहिला काठमाडौं ल्याइएको थियो । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस सन्चालनलगायत विभिन्न मागसहित अनसनमा रहेका केसी त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा छन् । उनका जायेज मागसम्बोधनमा सरकारले ध्यान नदिएको भन्दै पूर्वराष्ट्रपति डा रामबरण यादवले उनकामाग तत्काल संवोधन गर्न आग्रह गरेका थिए भने शुक्राबार टिचिङ डा केसीसँग भेट गरेका थिए ।
यसरी राष्ट्रप्रमुख वा पूर्वउपप्रमुखसँगको केसीको भेट यो पहिलो भने हैन ८ बर्ष यता डा केसीको नियति यस्तै बनेको छ । चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै डा गोबिन्द केसी अनसन बस्न थालेको पछिल्लो आठ बर्षमा प्रमुख दलका अधिकांश शिर्ष नेताहरुले सरकारको नेतृत्व गरिसकेका छन । यस अवधीमा सरकारले दर्जनौ पटक माग सम्बोधन गर्ने गरि सहमति गरेपनि कार्यान्वन हुन सकेन । यसरी सरकार र केसी बिच वार्ता हुने तर कार्यानोयन नहुने भन्दै सरकार विरुध दैनिक जसो प्रदर्शन हुँदै आएको छ ।
माइतिघरमा दैनिक केसीका पक्षमा नारा जुलुस भइरहदाँ सरकार भने केसीकामाग पुरा गरेको तर्क गर्छ । विहिबार मन्त्रीपरिषदको निर्णय सुनाउदै सरकारका प्रवक्ता प्रदिप ज्ञवालीले केसीका अधिकाम्स माग संवोधन भएको र केहीमाग पुरा हुने संघारमा रहेको भन्दै अनशन तोड्न आग्रह गरे ।
यसरी दिन प्रतिदिन डा केसीको अवस्था विग्रदै जादाँ पनि सरकारले वार्ताको पहल नगर्दा सरकार जनताको अधिकारबाट विमुख भएको देखिन्छ ।